Maxaad kala socotaa mudada uu garoomad aka maqnaan doono Neymar
Wednesday, December 19th, 2018 - 05:56:32
Monday February 26, 2018 - 18:54:32 in Wararka by Hussein Hadafow
Hogaamiyaha kooxda Paris Saint-Germain Neymar da Silva Santos Júnior Ayaa laga cabsi qabaa inuu dhoowr bilood garoomada ka maqnaado kadib markii uu dhaawacmay
26 jirkan heerka caalami ee xulka Brazil ayaa xalay ku dhaawacmay kulankii adkaa ee kooxdiisu ay 3-0 kaga adkaatay kooxda Marseille.
Neymar ayaa kaligiis is dhaawacay kadib markii uu isku dayey inuu kubadda kula baratamo mid kamida ciyaartoyda kooxda Marseille.
Hogaamiyaha xulka Brazil ayaa isagoo ilmeynaya garoonka laga saaray kadib xanuun daran oo kasoo wajahay dhanka Anqowga.
Qaar kamida wargeysyada ka faalooda arimaha Sportiga ayaa daabacay in laga cabsi qabo inuu Neymar garoomada ka maqnaado muddo dhowr isbuuca isla markaana uu ka baaqsado kulanka weyn ee kooxdiisu ay 6 bisha March la ciyaari doonto kooxda Real Madrid.
Tababaraha kooxda PSG Unai Emery oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu aad uga naxay dhaawaca soo gaaray ciyaaryahan Neymar wuxuuna intaa ku daray dhawaan in Scan la marsiin doono si loo ogaado xaaladiisa caafimaad iyo inta isbuuc ee uu garoomada ka maqnaan doono.
Neymar da Silva Santos Júnior oo ah xidiga ugu qaalisan xirfadleyda kubadda cagta ayaa ansixiyey 28 gool 30 kulan oo uu guud ahaan garoonka usoo galay kooxdiisa Paris Saint-Germain xagaaga hada aynu ku jirno ee 2017-2018.